तस्करलाई सघाएको आरोपमा ४ जना प्रहरी निलम्बन : RajdhaniDaily.com -
Home प्रदेश प्रदेश २ तस्करलाई सघाएको आरोपमा ४ जना प्रहरी निलम्बन
जनकपुरधाम । प्रहरीको मिलोमतोमा जनकपुरधाम क्षेत्रका तस्करी भइरहेको आरोप लागि रहेको बेला प्रदेश २ का चार जना प्रहरी कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको छ ।
लकडाउनको समयमा तस्करलाई सघाएको पाइएपछि निलम्बन गरिएको प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी धीरजप्रताप सिंहले बताएका छन् । निलम्बनमा परेकाहरुमा प्रहरी सहायक निरीक्षक राजाराम ठाकुर, प्रहरी हवल्दार विजय साह र चुनरमण चौरसिया र प्रहरी जवान अरुण तिवारी रहेका छन् ।
यी चारै जना सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकास्थित बबाल दोहन प्रहरी चौकीमा कार्यरत थिए । उनीहरुले आर्थिक लाभ लिएर तस्करलाई सघाएको खुलेको उनले जानकारी दिए । आर्थिक लाभ लिएर भारतबाट सामान ओहोरदोहोरमा सहयोग पु-याएको प्रमाण फेला परेपछि उनीहरुलाई निलम्बन गरिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उनीहरुको विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नेमा विश्वस्त छौँ : रामचन्द्र पौडेल
प्रदेश ४ Sushila Bishwokarma - December 28, 2020 0
दमौली । नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका पक्षमा फैसला गर्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताएका छन् । काङ्ग्रेस तनहुँ क्षेत्र नम्बर...
Breaking News Roshan Shrestha - February 9, 2020 0
अभिनेता अनमोलविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी
कला Prem Shyangtan - March 1, 2020 0
काठमाडौं । अभिनेता अनमोल केसीविरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंमा उजुरी परेको छ । चलचित्र खेल्ने भनेर पेस्की लिएको तर चलचित्र नखेलेको भन्दै निर्माता...
Breaking News Roshan Shrestha - March 8, 2020 0
Exclusive Kumar Raut - July 11, 2020 0